Archive du 16-oct-2020
Fanontaniana maro mpametraka ny hoe inona ny antony mahatonga ny lehilahy hampirafy. Ary nosinganinana manokana ny momba ny firaisana ara-nofo androany. Mifototra aminny firaisana ara-nofo tokoa ve ny antony mahatonga ny lehilahy hanandroa? Nanontany ny hevitry ny mpamaky izahay :
Fomba 5 natoraly, manala hao
Fomba 1 : Tongolo gasy Tongolo gasy sy voasarimakirana
Ny lokomena manendrika anao
Tafiditra ao anatinireo akora fanaovana maquillage be mpampiasa indrindra ny lokomena
Lehilahy 28 taona aho. Ny olako dia saro-piaro be loatra ny vadiko,
hany ka na ny mody ao an-trano aza mampalaina. Izaho anefa tsy manao na inona na inona fa toetrako ny tsy mba miavona amanolona,
Paipaika natoraly 3 ikoloana tarehy sy ny volo
Paipaika tsotra mety hanavotra anao ireto atoro ireto. Tsy dia manahirana firy izy ireo. 1 Mamotsy nify nihamavo (sary 1 sy 2 )
Pensez légèreté en été
La chaleur vous empêche de créer un ensemble parfait ? Pas de transpiration ? Notez, si cest dans vos gènes, vous ne pourrez rien y changer mais par contre, nous vous proposons divers éléments à maitriser pour les atténuer :
Misy antoka ny nify, nono, fitombenana
Tsy fantatra izay loza tampoka mety hitranga. Maro ireo olo-malaza no manisy fiantohana aminireo faritra aminny vatany, izay tena miantoka ny lazany.
Ravina manga sy goavy : Mampitony areti-nify !
Mety hampihena ny hery fiarovanny vatana ny areti-nify, indrindra moa raha tena lasa lavitra izany.
Shopping « Gasy ka tsara »
1. Fabrication de pins personnalisé  Papa Pins - Contact : 034 08 582 76 2. Sous-verre en bois  Kreat Ifa  Contact : 032 73 152 32
Mampidina tosi-drà aminny tongolo gasy
izao ny tena atao!
Zava-pisotro mampiakatra ny hery fiarovana voajanahary ao anaty ity entina aminao anio ity.
Ady aminny tsifanjariantsakafo Fianakaviana 300, nisitraka tohana ara-tsakafo
Mitohy ary mizotra tsara ireo asa tanterahinny Minisiteranny Fahasalamam-bahoaka manoloana ny ady aminny tsifanjariantsakafo any atsimo.
Alasora Mpamily mamo, nifaoka bevohoka sy zaza 6 taona
Fiara 309 iray no nifaoka raim-pianakaviana nandeha moto niaraka tamin'ny vadiny nitondra vohoka 8 volana sy ny zanany 6 taona tetsy amin'ny Domaine Alasora.
Hetsika Kéré 2020 Navitrika ny Barea Madagascar
Nanomboka ny 12 oktobra teo ny hetsika ataonny fikambanana iray avy ao La Reunion nampitondraina ny anarana hoe Kéré 2020,
Taom-pianarana 2020  2021 Efa nivoaka
Nivoaka omaly, tao aminny pejy Facebook-nny ministeranny fanabeazam-pirenena, ny tetiandrom-pianarana ho anny taona 2020  2021.
Centre Régional de lArtisanat Malagasy, Sofia Nahazo toerana fanaovana asa-tanana
Ho fanatsarana ny kalitaonny rofia malagasy sy ho fampiroboroboana ny sampam-pamokarana rofia dia notoloran-dRtoa Lantosoa RAKOTOMALALA,
"City Art" Niverina nisokatra omaly
Taorianny fikatonana noho ny hamehana ara-pahasalamana nolalovanny firenena dia niverina nisokatra nanomboka omaly ny "City Art" etsy aminny LA CITY Ivandry.
Fitsirihina tampoka Fiara 182 tsy lany fitsarana teknika, mbola mifamoivoy
Nanao fitsirihina tampoka ireo fiara mitondra ny laharana WW sy ireo fiara mitondra laharana vahiny ny avy ao aminny Foibe fitsarana ny fiarakodia na ny DGSR nanomboka ny 5 oktobra teo.
« Plateforme Arovy » Manana dokotera afaka manatona any an-trano
Noho ny antony maro, dia mety hisy sakana ny antony hahatonga ny marary iray tsy afaka manatona toeram-pitsaboana na dokotera.
EFOI Nanao fifampizarana fampivoarana ny tena
Nanatanteraka fihaonana fifampizarana tao aminny Pho Restaurant Ampasamadinika ny mpikambana ao aminny EFOI na « Entreprendre au Féminin de l'Océan Indien omaly maraina.
Fanajariana lalàna eny aminny kaominina Nahaliana ny maro ny momba ny fisaraham-panambadiana
Ny Kaominina Ambanivohitra Tsiafahy indray no nanohizana ny hetsika fampahafantarana sy fanajariana lalàna, izay karakarainny Fitaleavana misahana ny fandinihana sy fanavaozana ny lalàna (DERL) eo anivonny Ministeranny Fitsarana.
« Fisher Women Leadership Program » Vehivavy 30 avy any amorontsiraka no hisitraka azy
Natomboka taminny fomba ofisialy omaly alakamisy, andro iraisam-pirenena ho anny vehivavy eny ambanivohitra, miaina aminny fambolena sy ny fiompina ary ny jono ny tetikasa « Fisher Women Leadership Program ».
Fitrandrahana drakaka Voarara manomboka anio
Voarara manomboka anio maraina hatraminny 15 desambra 2020 misasakalina ny fanjonoana, ny fanangonana, ny famarotana, ny fividiana, ny fitaterana, ny fitehirizana ary ny fanondranana ny drakaka aminny endriny rehetra,